सुध्रिएन यातायात सेवा-सिण्डिकेटको माग गर्दै गरिएको बन्दका कारण यात्रुलाई सास्ती « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
सुध्रिएन यातायात सेवा-सिण्डिकेटको माग गर्दै गरिएको बन्दका कारण यात्रुलाई सास्ती
May 4, 2018 मा प्रकाशित
दाङ,२१ बैशाख । दाङमा सार्वजनिक यातायात क्षे त्रको विकास र विस्तार भइरहे पनि यातायात से वाको स्तर फे रिन सके को छै न । यातायात क्षे त्रमा संख्यात्मकरुपमा सवारी साधन थपिदै गइरहे पनि से वाको स् तर अझै फे रिएको छै न । जसबाट सर्वसाधारण यात्रुहरुले सुविधाभन्दा द्विविधापूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
‘चो कमा उभिनै हुन्न तुलसीपुर–तुलसीपुर भन्दै झ्याप्पै हात समाते र तान्छन् । कहा“ जाने हो ? के गर्ने ? सो ध्दै नसो धी हात हाले र तान्छन् । जसले गर्दा सुविधाभन्दा बढी द्विविधा भो ग्नु परे को तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ का भक्तबहादुर ओ लीको दुखे सो छ । ‘एउटा हो ला र ? दुईतीनजनाले एकै पटक हातमा जे –जे छ त्यही खो स् छन्’– उहा“ले भन्नुभयो  । जसले गर्दा आफूहरुले सास् ती भो ग्नु परे को उहाको भनाइ छ ।
यात्रुहरुको सहज से वाका लागि यातायात क्षे त्रको विकास भइरहे पनि सहज से वाको विकास हुन नसक्दा यात्रुहरुले असुविधा भो ग्नु परिरहे को छ । स् थानीय रुटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनहरुमा यात्रुमै त्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा यात्रुहरुले कष्टकर अवस् था भो ग्नुपरे को ओ लीको गुनासो छ । ‘हातै नहाली आफै गाडीमा चढ्ने दिन कहिले आउला ?’– उहाले प्रश्न गर्नुभयो  । क्षमताभन्दा बढी यात्रु बो क्ने प्रवृत्तिले पनि यात्रुहरु ले कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उभिन नमिल्ने गरी मान्छे को च्दा बृद्धबृद्धा, गर्भवती महिला, बालबच्चाहरुले निकै सकस भो ग्नुपरे को ओ लीको गुनासो छ ।
त्यस् तै घो राही उपमहानगरपालिका–१५ तुलसीपुर चो ककी प्रत्यक्षदर्शी स् थानीय पुष्पा पौ डे लले भन्नुभयो – ‘महिला पनि भन्दै नन्, बालबच्चा पनि भन्दै नन् ।
झ्याप्पै हात हाली तानिहाल्छन् । कतिपयले हप्काउछन् ।’ जसले महिलाहरुलाई बढी दुःख हुने गरे को उहाले बताउनुभयो  ।
‘हात हाले र तान्छन्, के गर्ने बाध्यताले चढ्नै पर्छ, हातै नहाली बस् नुस् भन्न सकिदै न र ?’ उहा“ले प्रश्न गर्नुभयो  । यातायात क्षे त्रको विकास र बढ्दो प्रतिस् पर्धाले यात्रुमै त्री व्यवहार हराएको छ । जसले गर्दा यात्रुहरुले यात्रुमै त्री व्यवहार पाउन नसके को उहाले बताउनुभयो  ।
सार्वजनिक यातायात से वा नाफामुखी से वाको रुपमा विकास भइरहे काले जो खिमपूर्ण यात्रा गर्नुपनेर् बाध्यता अझै नछुटे को उहाको भनाइ छ ।
यात्रुमै त्री व्यवहारमा कटिवद्धछौ यातायात व्यवसायीहरु
यातायात क्षे त्रको संख्यात्मक विकास मात्रै हो इन, सभ्य, सुरक्षित यातायात से वाको विकासमा आफूहरु कटिबद्ध रहे को यातायात व्यवसायीहरुले बताएका छन् । राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात बस व्यवसायी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतनाथ यो गीले दाङमा यातायात से वाको अभाव नभए पनि यात्रुमै त्री व्यवहारको अभाव रहे को बताउनुभयो  । उहा“ले आम यात्रुहरु अप्ठ्यारो मा परे काले त्यसतर्फ यात्रु र व्यवसायी दुबै सचे त हुुनुपर्ने बताउनुभयो  ।
त्यस् तै नमस् ते राप्ती यातायात प्रालिका अध्यक्ष वामदे व खनालले नया“ से वाको विकाससगै यात्रुमै त्री व्यवहार र सुरक्षित यातायात से वाको विकास नै आफूहरुको पहिलो संकल्प रहे को बताउनुभयो  । से वामा संख्या थपिए पनि से वाको संस् कार फे रिन नसक्दा यात्रुहरु मर्कामा परे काले संस् कार बदल्ने प्रयासका साथ प्रालिले से वा विस् तार गरिरहे का उहाले बताउनुभयो  ।
यातायात क्षे त्र अशिक्षित र बे रो जगारहरुले गर्ने पे शा भन्ने सो चको अन्त्य गर्न सके यात्रुमै त्री व्यवहार र संस्कारको विकास गर्न सकिने सहारा यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरे न्द्र के सीले बताउनुभयो  । ‘प्रालि त्यही संस्कार र व्यवहारको अन्त्यका लागि निरन्तर यात्रुकै पक्षमा लागे को छ । से वामा सुधारको प्रयास गरिरहे का छौ ं’– उहँले भन्नुभयो  । स्थानीय रुटमा से वा सञ्चालन गर्न नसक्दा स्थानीय यात्रुहरुले स्तरीय से वा पाउन नसके काले प्रालिले अब छिट्टै स्थानीय रुटमा से वा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहे को उहाँले बताउनुभयो  ।